TALIYAHA BOOLISKA JSL OO KA WARAMAY AMAANKA IYO DADKA U XIDHXIDHAN | Toggaherer's Weblog
KOBCISO AQOONTAADA CAAFIMAAD WAA MAXAY HIV?
XUKUUMADDA SOMALILAND IYO XAFIISKA ITOOBIYA EE HARGEYSA OO ISKU HAYSTA GANTAALAHII LA QABTAY
TALIYAHA BOOLISKA JSL OO KA WARAMAY AMAANKA IYO DADKA U XIDHXIDHAN
Posted by: toggaherer on: January 27, 2009
Taliyaha Booliska oo ka waramay amaanka iyo dadka u xidh-xidhan
Isbedalada tabbaha Tuuga, Tibaaxda Baadhista arrimaha taagan iyo Talaabooyinka Boliska
-Halkay maraysaa Baadhista 10-kii dhalinyarada ahaa ee lagu qab-qabtay Madaarku?
-Taliyaha Bolisku Muxuu ka yidhi Gantaalaha Wasiirku Arrimaha guduhu sheegay qabashadooda?
“Horta, Qorigu Loox maaha ee waa Qori loogu talo-galay haddii Naftiisa la weeraro qofka Ciidanka ah ama laga qaado inuu isku difaaco oo Sharcigaa dhigaya….” Taliyaha Ciidanka boliska
Hargeysa (Ogaal)-Taliyaha guud ee Ciidamada Booliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubbad ayaa sheegay in la filayo in ay maanta soo gebogebeeyaan baadhitaanno ay maalmahanba ku wadeen Koox Dhalinyaro ah oo ay Xukuumadda Somaliland toddobaadkii hore ka qabatay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Hargeysa. Waxaanu ka warbixiyay hawl-gallada ay Ciidamada Boolisku ka wadaan Magaalooyinka Dalka.
Taliyaha Booliska Somaliland oo shalay Xafiiskiisa ugu waramay Wargeyska Ogaal iyo Telefishanka Caalamiga ah ee HCTV, waxa uu sheegay in ay gebo-gebo ku dhaw dahay baadhis ay ku wadeen 10 Dhalinyaro ah oo toddobaadkii hore ay Ciidamada Ammaanka Somaliland ku qabteen Garoonka Diyaaradaha Hargeysa ee Egal International Airport, isla markaana ay suurtogal tahay in ay maanta soo bandhigaan natiijada Baadhistaas. “Gacantaanu ku haynaa baadhistaa, Kiisaskana ma sheegno ilaa aanu hubino in wixii uu yahay Kiis aanay waxba ka jirin iyo in uu yahay mid hore loogu dhaqaaqo. Tiradoodu 10 weeye oo waanu haynaa, baadhistiina waa iska gebogebo oo waxa laga yaabaa in aanu berrito (maanta) aanu sii dayno (soo bandhigno) arrintaas. Baadhistuna iyada ayaa is-sheegi doonta ee waanu sii daynaynaa.” Ayuu yidhi Taliyaha guud ee Booliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubbad waxa uu sidoo kale ka gaabsaday inuu faah-faahin ka bixiyo Gantaalo lidka Diyaaradaha ah oo wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay ku qabteen Hargeysa, waxana uu ku soo gaabiyay sidoo kale in arrintaa baadhisteedii socoto.
Mar Talilyaha la waydiiyay sababta keenta in haddiiba qof Ciidanka ka tirsani uu Dil geysto loogu raaco cidda ama Beesha uu qofka Askariga ahi ka soo jeedo, ayaa wuxuu sheegay in aanay hadda taasi jirin, balse ay Dawladdu bixiso wixii uu geysto qofka Askariga ahi. “Horta, Qorigu Loox maaha ee waa Qori loogu talo-galay haddii Naftiisa la weeraro qofka Ciidanka ah ama laga qaado uu isku difaaco oo Sharcigaa dhigaya, balse Qof waalan maaha oo iskagama dhufanayo qofka, balse haddii ay dhacdo waxa uu u tababaran yahay in uu ka toogto meel uu ka dhimi karo quwadda qofka la dagaallamaya. Waana layska leeyahay Boolisku dadkuu dulmayaa, waxanu samaynayaa, dadkuu u hanjabayaa. Arrintana in badan waanu iska aragnay Wax-garadka oo badankooda waanu is-fahamsannahay. Haddiiba Askarigu Dil geysto ma dhacdo in arrintan loo raaco Beelaha, Askarigu wuxuu geysto Dawladda ayaa masuul ka ah mar haddii uu Booliska galay, Ciidamada galay ama uu hawl Qaran hayo. Wuxuu geysto Dawladda ayaa bixinaysa, wixii loo geystana..Xeer-ilaaliyaha Guud oo Ciidanka iyo Dawladdaba Wakiil ka ah ayaa wadaya. Sidaas weeye Xeerku.”
Taliyaha guud ee Ciidamada Boolisku wuxuu ka war bixiyay hawl-gallo ay Ciidamada Boolisku ka sameeyeen Magaalooyinka dalka. “Iyada oo ay awalba caado noo ahayd in aanu Olole qaadno ayaanu hadda kordhinay oo Boqol iyo saa’id qof ayaa la xidhay oo Maxkamadda la geeyay, maantadan (Shalay) waxa iyana Maxkamadda (Hargeysa) la geynayay ilaa dhawr iyo soddon Tuug oo kale, waxa kale oo iyana aanu qabanay Khamrigii oo isna inkaar qaba oo halka ay ku kulmaan ah. Hargeysa oo kaliya ma ahayn ee gobollada ayaa iyana aanu ka fulinay, Burco waxa laga qabtay 32 qof, dhawr iyo toban ka mid ah ay ku xukuntay 2 sanno oo Xadhig ah, Berbera-na waxa laga qabtay tiro kale oo caadaysatay Khamriga iyo dembiyada.. waxa kale oo aanu soo qabanay dadkii caadaystay dhaca Moobilada.” Ayuu yidhi Maxamed Saqadhi Dubbad.
Taliyuhu wuxuu sheegay in Tuugada, dhaca iyo dembiyada kale ee dalka ka dhacaa ay yihiin kuwo hormar gaadhay sida dhaqdhaqaaqyada kale, isla markaana maalinba qaab cusub loo waajaho. “Horumar ayay ka gaadhayaan dembiyada, oo tusaale ahaan Khamriga waxaynu ku ogayn in Quraarado lagu keeno, waa laga gudbay oo waxa loo gudbay in lagu shubo Caagado yaryar oo loo bixiyay Sharaabka Nin weyn, kaa markii aanu ku qabanayna waxay isticmaaleen Daasada yaryar ee Sharaabka laga cabbo. Taasna way ka bedeleen oo waxay u bedeleen Falaasadaha Shaaha oo sidaad ogtahay dhinaca dambe marka Daboolka laga furo ku leh God u dhaxeeya Quraaradda iyo Caagga, halkaas ayaa lagu guraa isaga oo Baco ku xidhan. Dabadeed, Miis yar ayaa la samaystay oo waxa la dul saaray Koobabka Shaaha lagu cabbo. Halkaas ayuu Qofkii doonayay Khamrigu uu astaan bixinayaa oo uu odhanayaa Kii Ninka weyn I sii, dabadeed inta Falaasta xagga dambe laga rogo ayaa Bac uu ku xidhan yahay Khamrigu laga soo saarayaa oo la siinayaa.” Ayuu yidhi Maxamed Saqadhi, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Tallaabadaana waanu qabanay oo way ka gudbeen, waxa imika ugu dambaysay inay Gaadhi Mark II ah ku wareejiyaan oo ay Dukaan ka dhigaan iibiya Khamriga. Horumarkaas ayay ka sameeyaan, Tuugtuna toddoba ilaa Siddeed ayay isku raacayaan oo Guryihii ayay garaacayaan, marka la moodo qof Gurigii garanaya ee laga furana, waxa lagu qabanayaa Baastoolad ama Middi dheer. Haddii qofku Lacagta dhiibi waayo ama Telefoonka Gacanta, waa la dilayaa. Sababtoo ah, waxay sitaan waa Leewar-ka baabuurta oo la tumay oo Middi laga dhigay. Nimanka sameeya ee tuma digniin baanu siinay oo ay ugu horrayso, in uu Liisan yeesho, in waxan uu samaynayo uu ku koobo Middiyaha Hudheelada ee Cuntada lagu cuno.”
Sidoo kale Taliyaha waxa la waydiiyay in waxyaabaha dhiirgelinaya dembiyada ka dhaca Magaalooyinka dalku ay qayb ka tahay isku-xidhnaansho la’aan Booliska dhexdiisa ah, waxaanu kaga jawaabay, “Taasi waa been, wax hoos u dhac ah oo yimi ma jirto, in dhexe way jirtay, laakiin intan dambe kor baanu u soo qaadnay. Waxaanu Arday ka qaadanay Jaamacadihii..Shalay (dorraad) waxa dalka dib ugu soo noqday Sarkaal aqoon dibadeed soo bartay oo hoggaamin doona Urur wayn oo Ciidan. Inkasta oo aananu kharash haynin, haddana waxaanu kiraysanay Guryo badan, maadaama ay Magaaladii (Hargeysa) waynaatay. Waxaanu ku siyaadinay Rugo (Boolis), maadama ay kala fogaadeen Saldhigyadii Booliska iyo Magaaladii, toddobaadkanna waxaanu furaynaa Aw-Barkhadle oo aanu ka samaynayo Xarun, waa Degmo qaddiim ah oo waxa hoos yimaada Dhul ballaadhan oo Beeralay ah. arrinkaasi arrin jira maaha, balse dadka waxaa sheegayaa waa mid aan waxba ogayn.”
Taliyuhu wuxuu sheegay in ay samayeen Guddiyo Xaafadeed oo la shaqayn doona, isla markaana ay Idaacadda Dawladda ka samaysan doonaan toddobaadkii hal maalin oo ay Bulshada kala hadlaan, kana baahiyaan dhacdooyinka toddobaadlaha ah ee ka dhaca Magaalada Hargeysa.
Xigasho : OGAAL